रोचक सामग्री Archives - Page7of 12 - Daily State News
हवाइजहाजबाट नांगै हाम फाल्नु कुनै जोक होइन, किनकि यो जो कोहीले गर्न सक्ने काम हुँदै होइन । तर, अष्ट्रेलियाका संगीतकार ग्लेन डोनेलीका लागि भने यो जिन्दगीको एउटा इच्छा नै थियो । जसलाई उनले पूरा गरिछाडेका छन् । ग्लेनले आफ्नो ३० औं जन्मदिनका अवसरमा उनले निर्वस्त्र स्काइडाइभ गर्ने निधो गरे र त्यसरी तल खसिरहँदा भायलिनमा कुनै […]
स्पेनमा वार्षिक गोलभेंडा युद्ध पर्व सम्पन्न भएको छ । भ्यालेन्सियाभन्दा २५ माइल पश्चिममा रहेको बुनोल सहरमा हरेक वर्ष अगष्ट महिनाको अन्तिम बुधबार ला टोम्याटिना नामक गोलभेंडा युद्ध पर्व मनाइन्छ । यो पटकको गोलभेंडा युद्ध पर्व चाहिँ विशेष रह्यो । किनकि यो गोलभेंडा लडाइँ पर्वले यसपटक विश्वकीर्तिमान कायम गरेको छ, विश्वको सबैभन्दा ठूलो खानेकुरा लडाइँ खेलको […]
विश्वका ७ चर्चित यौन बजार – जहा पर्यटक केवल सेक्सको लागि घुम्न जान्छन र खुल्लम खुल्ला हुन्छ धन्दा
एजेन्सी । पछिल्लो समयमा सहबास बजार विश्वमा नै फस्टाउँदै गएको छ । कतिपय देशहरुमा यौन बजार वैध छ भने कतिपय देशहरुमा बर्जित भएपनि गोप्य रुपमा सहबास बजार फस्टाइरहेको छ । ती मध्ये केही सेक्स बजार यस्ता छन् । १. डोमेनिकन गणतन्त्रविश्व सहबास बजार मध्ये क्यारेबियन राष्ट्र डोमेनिकन रिपब्लिक सबैभन्दा अगाडि मानिन्छ । यहाँ ६० हजार महिला […]
राष्ट्रपतिको ‘हनिमुन’मा ३१ लाखको मेकअप
एक सय दिनमा एउटा सामान्य व्यक्तिले आफ्नो सिँगारपटारमा कति खर्च गर्ला ? महिलाको हकमा मेकअपको खर्च अलिक बढि आउला तर पुरुषको हकमा चाहिँ सामान्यतया खासै उल्लेखनीय नहोला त्यो खर्च । तर फ्रान्सका तन्नेरी राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोले आफुले सत्ता सम्हालेको १ सय दिन अर्थात हनिमुन अवधिमा मेकअपमै झण्डै ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम खर्च गरेका छन् । […]
यौन सम्बन्धपछि पुरुष सुत्न चाहन्छन् भने महिला कुराकानी गर्न चाहन्छन् । यसको जैविक कारण छ । वास्तवमा, चरमोत्कर्षपछि शरिरमा प्रोलेक्टिन नामक बायोकेमिकल रिलिज हुन्छ । यसले शरिरलाई रिल्याक्स गर्दछ भने थकानको महसुस गराउँछ । पुरुष धेरैजसो चरमोत्कर्षमा पुग्ने गर्दछन् तर महिला हरेक पटक चरमोत्कर्षमा पुग्छन् भन्ने हुँदैन । त्यसकारण पुरुषलाई निन्द्रा लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ […]
यो जेललाई देख्दा तपाईंलाई पनि कैदी बन्ने इच्छा जाग्ला, यस्ता छन् सुविधा
फाइभ स्टार होटल हुनु त सामान्य कुरा भयो । तर के फाइभ स्टार जेल हुनुपनि सामान्य हो त ? निश्चित रुपमा होइन । तर अष्ट्रियामा चाहीँ एउटा फाइभ स्टार जेल छ । अष्ट्रियाको जस्टिस सेन्टर लियोबेन एउटा यस्तो जेल हो, जो आफ्नो भव्यता तथा आलीशान सुविधाहरुका कारण चर्चित छ । यो जेलका भव्य तस्वीरहरु हेर्दा […]
थाहा पौनुस, तपाईँको लागि कुन दिन जन्मिएका प्रेमि/प्रेमिका भाग्यशाली हुन्छ
अङ्कज्योतिष शास्त्रका अनुसार व्यक्तिको जन्म तारिखको आधारमा उसको भविष्य, प्रेमप्रसङ्ग र जीवनसँग जोडिएका अन्य कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ। सोही अनुरूप, तपाईँको जन्म तारिखको अनुसार तपाईँको लागि कुन तारिखमा जन्मिएका प्रेमजोडी भाग्यशाली हुन्छ जान्नुहोस्ः आफ्नो अङ्क कसरी थाहा पाउने?ज्योतिषशास्त्रमा भाग्यशाली प्रेमजोडीको विषयमा १ देखि ९ अङ्क निर्धारण गरिएको छ। यहि अङ्कबाट तपाईँका खास कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ। […]
प्रेममा न उमेर हेरिन्छ, न त जातपात । इण्डोनेसियाका ६२ वर्षका एक पुरुषले यसलाई प्रमाणित गरिदिएका छन् । ६२ वर्षका सुलेमान दायंग नगम्पाले आफूभन्दा ४४ वर्ष कान्छी युवतीसँग हालै बिहे गरे, त्यो पनि लभ पारेर । १८ वर्षकी डायना डायंग नगनियांग र ६२ वर्षका सुलेमानको लभस्टोरी अहिले चर्चामा छ । चर्चाको प्रमुख कारण उनीहरुबीचको उमेरको […]
फोटो खिच्दा पोज दिनु त यस्तो पो, ट्विटरमै मच्चायो हंगामा
एकजना अज्ञात मानिसले अनौठो तथा असजिलो पोज दिएर खिचेको फोटो ट्विटरमा अहिले भाइरल बनिरहेको छ । पानीमाथि ढुंगा राखेर त्यही ढुंगामाथि पाइताला, घुँडा र कुइनो अठ्याउँदै ती युवकले पोज दिएका छन् ।उक्त तस्वीरलाई ट्विटेहरुले धमाधम रिट्विट गर्नुका साथै विभिन्न थिममा प्रयोग गरी अनौठा तस्वीरहरुमा ढालेका छन् । कतिपयले यो तस्वीरलाई माइकल एन्जेलोको क्रिएसन अफ एडमसँग […]
२५ वर्षे युवतीले फेसबुकमा लेखिन्, ‘मलाई गर्भवती बनाऊ र पाँच सय युरो लैजाऊ
एजेन्सी । इन्टरनेटमा आफ्नो तस्विर राखी आफूलाई गर्भवती बनाउन पुरुषलाई खुलेआम यौन प्रस्ताव राखेपछि एक जना रोमानियाली महिला अहिले सेलिब्रेटी बनेको छन् । पश्चिमी रोमानियाको टिमिसोआरामा बस्ने यी २५ वर्षीया अडेनिया अबलुले आफूसँग यौनसम्पर्क राखेर गर्भवती बनाउने पुरुषलाई ५ सय युरो पारिश्रमिक दिने घोषणासमेत गरेकी छन् ।आवेदनमा छानिएका पुरुषले वीर्य उपलब्ध गराए पनि उनले अभिभावकको अधिकार […]